WHO inoda mupiro wemabhiriyoni emadhora emushonga weCCVID-1
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » WHO inoda mupiro wemabhiriyoni emadhora emushonga weCCVID-1
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuona kuti vese vakatenderedza pasirese vari panjodzi yekukanganiswa nehutachiona, kusanganisira vashandi vezvehutano, vanhu vakura uye avo vane mikana mikuru, vanogona kubaiwa jekiseni nekukurumidza idanho rakakosha kudzora denda iri.
Iko kumhanya kweCOVID-19 yekudzivirira redhiyo kubva kune yakakwira mari kune nyika dzine mari shoma inononoka.
Nyika dzakapfuma dzakakurudzirwa kuti vape kanenge bhiriyoni doses yemishonga yekudzivirira yeCOVID-1.
Kusvika pari zvino, nyika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe dzakatambira majekiseni anosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe.
Ellen Johnson Sirleaf, aimbova Mutungamiriri weLiberia, naHelen Clark, vaimbova Mutungamiriri weNew Zealand, vakaratidza kushushikana kwakadzama pamusoro penzvimbo inononoka yekuparadzaniswa kwejekiseni kubva kune vane mari zhinji kuenda kune nyika dzine mari shoma.
Vaviri vaimbova vatungamiriri vakashanda sema-co-chair eI Independent Panel paPandemic Kugadzirira uye Kupindura (IPPPR), yakatangwa ne World Health Organization (WHO) muna Chikunguru 2020. Chirevo chayo chekupedzisira chakaburitswa muna Chivabvu.
"The Independent Panel chirevo chakakurudzira kuti nyika dzinotambira mari yepamusoro dzive nechokwadi chekuti mishonga yekudzivirira mishonga inosvika bhiriyoni imwe chete yakawanikwa kwavari yakagoverwa kunyika makumi mapfumbamwe neshanu dzinowana mari nepakati na92 Gunyana, uye imwe biriyoni dhosi nepakati pa1", ivo yakaziviswa.
"Kuona kuti vese pasi rose vari panjodzi yekutapukirwa nehutachiona, kusanganisira vashandi vezvehutano, vanhu vakura nevaya vane dambudziko rakakura, vanogona kubaiwa jekiseni nekukurumidza idanho rakakosha kudzora denda iri."
Parizvino, yepasi rose yekubatana chirongwa COVAX chakatumira 99 mamirioni akapihwa madhizaini, vakadaro. Nepo nyika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe dzakatambira majekiseni emamiriyoni makumi masere nemasere nemapfumbamwe, izvi zvakapfupika pane bhirioni rimwe rakadaidzirwa mushumo.
“Nyika dzinotambira mari yepamusoro dzakaraira kuwanda kwemadhora akawandisa zvakapetwa kaviri sezviri kudiwa kuvanhu vawo. Ino ndiyo nguva yekuratidza kubatana nevaya vasati vakwanisa kubaya majekiseni evashandi vavo vehutano uye vanhu vanotambura, ”vakadaro vatungamiriri.